Garowe: Hanaankii Dimuquraadiyadeed ee lagu waday Puntland in ay ku dhaqanto oo bur buray.
Dagaallo lagu jabiyay ciidammada gumaysiga Itoobiya.
Dilal iyo xidhay ay ciidammada gumaysigu u gaysteen dadwaynaha.
Taliska CWXO oo bogaadin u diray shacabka Ogaadeenya.
K/xigeenka Hogaanka arimaha dibada ee jwxo oo aan ka waraysanay xaaladaha ka taagan Ogadenya.
8/07/07 koox Dabaqoodhi ah oo ciidammada gumaysigu iska soo hormariyeen ayaa soo weeraray cutub ka tirsan CWXO oo ku sugnaa degmada Haarcad, hase yeeshee CWXO ayaa is-difaacay markii weerarkaas xaqdarrada ah lagu soo qaaday, waxayna kooxdii weerarka wadday ka dileen 13 ka mid ah, waxay sidoo kale ka dhaawaceen 9 kale.
12/07/07 waxay ciidammada gumaysigu nawaaxiga Dhagaxbuur jidhdil xun ugu gaysteen oo ka dibna ay la tageen 3 nin oo shacab ah oo magacyadoodu ayna wali na soo gaadhin.
Taliska sare ee Ciidammada Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya CWXO ayaa dhambaal bogaadin ah u diray dadwaynaha Ogaadeenya, isagoo ku bogaadiyay sida geesinimada iyo adkaysiga leh ee uu ugu gegsaday dhibaatooyinka wajiyada badan leh ee xukuumadda gumaysatada Itoobiya ku hayso iyo sida waddaninamada ah ee uu isu garab istaagay dagaalka ay naftood hurayaasha CWXO kula jiraan taliska hororka ah ee gumaysatada Itoobiya.
Taliska CWXO wuxuu shacbiga Ogaadeenya, yar iyo wayn, rag iyo dumarba, ugu hanbalyaynayaa sida isku duubnida ah ee uu ugu gacan saydhay keenada uu gumaysigu isku dayay inuu ku galiyo, isagoo adeegsanaya noocyo kala duwan oo ciqaab ah, sida dilka gumaadka ah, xidhayga wadarta ah, kufsiga, boobka hantida, gubista magaalooyinka iyo aqallo soomaaliga iyo gaajaysiinta wadareed, sidaas waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska guud ee CWXO.
Bayaankan ayaa lagu sheegay in shacbiga geesiga ah ee Ogaadeenya uu ku guulaystay inuu fashiliyo qorshihii cadowga ee ahaa inuu qasab ku aqbalsiiyo hooggaankiisa gumaysi, isla markaana awood ku muquuniyo, si ay isu dhiibaan oo u oggolaadaan heeryada gumaysiga. CWXO waxay ku dhaadanayaan adkaysiga uu shacabkoodu muujiyay iyo taageerada uu u hayo halgankiisa xaqa ah, iyadoo ayna marna suuragalaynin in cadaadiska iyo dhibka uu gumaysigu ku hayo ay ku qasbaan inay ka leexdaan toobiyaha xorriyada iyo sharafta.
iyo dadkeeda ka taliso.